Ma jiraan waxyaabo ay ka mid yihiin macluumaad SEO ah oo xun?
Dhammaantiina waxaad la kulantay mowduucyada ku saabsan raadinta mashiinka raadinta internetka. Haddii aad ugu yaraan leedahay khibrad yar oo ku jirta qaybtan, waxaa laga yaabaa inaad kala soocdo talooyinka tayada SEO iyo talooyin (sida MOZ, Soodal ama Muuqaal Muuqaal Raadi ah) oo aan faa'iido lahayn iyo xitaa mararka qaarkood khaldan macluumaadka ku saabsan habsami-gelinta ay bixiyaan dad aan xirfad lahayn. Si kastaba ha noqotee, haddii aad tahay qof ku cusub suuq-geynta suuq-geynta, moodooyinka tayada qaarkood waxay noqon karaan wax yar oo jahawareer ah xitaa xitaa baabi'iya darajooyinka Google. Tilmaamahan gaaban, waxaan ku siin doonaa qaar ka mid ah fikradaha sida aad u qaldan ee SEO ah oo aad u baahan tahay si looga fogaado in aad ganacsigaaga barwaaqo.
Qeexitaanka macluumaadka SEO-ga xun
Haddii aad la yaaban tahay waxa xun ee SEO ah, waxaan kugula talinayaa inaad akhrido cutubkan si taxadar leh. Waxyaabaha xun ee SEO ah waa ALL oo ku saabsan dib-u-dhigga, waxtar lahayn iyo ka baxsan xuduudaha macluumaadka heerarka engine search. Waa sahlan tahay in la kala saaro waxyaabo xun oo SEO ah sida badanaa waxay ku bilaabataa erayada "sida aan u hagaajiyo website-ka SEO-ga maalin uun ". Badanaa, maqaallo noocan oo kale ah waxaa ku jira sheyaal sharraxaad gaar ah. Khabiirada SEO-ga SEO waxay abuuraan sheekooyin aan la rumaysan karin si ay kor ugu qaadaan adeegyadooda. Waxaan kugula talinayaa inaadan akhrin maqaalkan noocaan ah maadaama aysan haysan wax macluumaad ah oo qiimo leh. Waxaa intaa dheer, waxaad halis u tahay in aad wax ka baddasho boggaga internetka adoo raacaya talooyin madow SEO ah. Sidaa daraadeed aan ka wada hadalnay talooyinka wax ku oolinta aan u baahannahay inaan ka fogaano in aan dhaawacno sumcadda bogga.
Maaddada muhiimka ah
Mid ka mid ah talooyinka ugu ballaadhan ee SEO loo isticmaalo waa ereyga muhiimka ah. Maaddaama Google uu noqdo mid dareen badan, maalin kasta oo ah qaab-hawleedka ayaa kashaqeynaya. Maalmahan, waxaad u baahan tahay inaad abuurto waxyaabaha aad soo booqaneyso boggaga soo booqda, ee ma aha boodbooyinka raadinta. Waxaa intaa dheer, xayndaabyada Google ayaa sidoo kale qiimeyn kara tayadaada iyo tirinta tirada ereyada muhiimka ah. Haddii aad leedahay wax ka badan shan erey oo muhiim ah bog kasta, waxaad halis u tahay inaad hesho ganaaxyada Google. Waxaa intaa dheer, content content stuff ah lama akhriyi karo iyo ma noqon kartaa faa'iido leh dadka isticmaala sida ay u abuuray oo kaliya ujeedooyinka advertising. Intii aad walwal ka lahaan lahayd ereyada muhiimka ah, waa in aad doorataa weedhaha ugu muhiimsan iyo tarjumaadaha muhiimka ah oo aad ku geliso mawduucyadaada, sharraxaadaha, furitaanka cutubyada, ALT-yada iyo dhowr jeer qoraalka.
. Hase yeeshee, waa xukun khalad ah. Adigoo daabacaya sheeko isku dhafan, waxaad xakameysaa makiinadaha raadiyaha raadinaya si aad u aragto qaababka aad jeceshahay halkii ay ka ahaan lahaayeen sida dhabta ah. Sidaa darteed, waxyaabaha aan asalka ahayn waxaa laga yaabaa inay keenaan dhibco ku jira darajooyinka boggaaga. Waxaa jira boqolkiiba inta yar oo aad ku heli karto ganaaxyada Google si ay u helaan waxyaabo isku dhafan. Si kastaba ha ahaatee, si toos ah uma hagaajin doontid goobtaada joogitaanka goobtaada adigoo soo saaraya nuqullo daabacan oo ah Google oo horeyba u leh mawduuc isku mid ah. Haddii aad u baahatid in aad leedahay qaar ka mid ah waxyaabo badan oo ku saabsan boggaaga sababtoo ah baahida ganacsi ee isku mid ah, waa inaad "maya timaadaa, mana raacna" macnahan si looga fogaado wixii natiijooyin taban Source .